Agaasime ka tirsan Somaliland oo Dhoolatus Siyaasadeed ku sameeyay Xukumada Madaxweyne Muuse Biixi
June 13, 2019 - Written by mandheera news
Hargeysa(Mandheeranews)-Agaasimaha Guud ee wasaarada Shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland. Maxamed Cillmi Aadan (Ilkacase) ayaa sameeyay dhoolatus siyaasadeed iyo fariin uu u diraayo Madaxweyne Muuse Biixi.
waxanu qado sharaf u sameeyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay iska soo horjeedaan Madaxweyne Muuse Biixi, kuwaas oo isugu jira wasiiro hore iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga Wadani.
Agaasime Ilkacase ayaa la sheegay in uu martiqaadka u sameeyay Xubnaha Mucaaridka ku ah Madaxweyne Muuse Biixi, waxana intii Qadadu Socotay halkaasi la isku waydaarsaday Kaftan iyo Sheeko lagu naaqishay siyaasada Xukumada iyo Hogaaminta Madaxweyne Muuse Biixi, waxana hadalkodu u badnaa dhaliil ay dusha ka saareen Madaxweyne Biixi. Agaasime Ilkacase ayaa dhaliisha ugu xooga badan goobta ka sheegay. waxanu Madaxweyne Biixi ku tilmaamay shaqsi ku fashilmay Hogaamintii dalka.
ilaa hada lama garanayo sababta keentay in masuul ka tirsan Xukumada Madaxweyne Muuse Biixi uu casuumad dhoolatus ah u sameeyo mucaaridka, waxase loo malaynayaa in Agaasime Ilkacase u badheedhay in uu mucaaridad kala horyimaado xukumada uu ka tirsan yahay.
Agaasime Ilkacase, waxa shaqada wasaarada laga joojiyay mudo haatan laga joogo laba bilood, waxana khilaaf xaga shaqada ahi u dhexeeya wasiir Hinda Jaamac Gaani, waxana inta badan lagu arkaa isaga oo kolba jooga Hotelada magaalada Hargeysa.
Agaasime Ilkacase, waxa hore looga soo bedelay dhowr wasaaradood ka dib markii ay wada shaqayn kari waayeen masuuliyiinta iyo shaqaalaha waxana lagu tilmaama shaqsi khilaaf badan oo ay adag tahay in lala shaqeeyo. waxanu hore ula soo shaqeeyay xukumadii hore ee Axmed Siilaanyo.